ချစ်စဖွယ်အမှုအရာလေးနဲ့ တမူဆန်းကာ Titk Tokဆော့ပြလိုက်ပြန်တဲ့ နန်းမွေစံ – Online News Post
ချစ်စဖွယ်အမှုအရာလေးနဲ့ တမူဆန်းကာ Titk Tokဆော့ပြလိုက်ပြန်တဲ့ နန်းမွေစံ
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေ့စံ ကတော့ အခု လက်ရှိမှာ ဆိုရင် ပရိတ်သတ် တွေ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု အများအပြား ရရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ ။ သူမဟာ အမိုက် စားခန္ဓာ ကိုယ် အချိုးအစား ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ပုံရိပ်အလန်း တွေဟာလည်း ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကိုအမှန် အကန် ဟတ်ထိစေ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ မွေ့စံ ဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည် နေတာလည်း ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် နော် … .
နန်းမွေ့စံ ဟာ အခု ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် brand နဲ့ အကျီ တွေထုတ် နေတာလည်း ဖြစ်ပြီး အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်တိုက် ဆိုသလို လုပ်‌ကိုင် နေတာတွေ့ ရပါတယ် ။ နန်းမွေ့စံ ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံလေး နဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းတွေဟာ လည်း ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ရေပန်း စား နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော် … .
မကြာ သေးမီ ကလည်း နန်းမွေစံ ဟာ သူမ ရဲ့ Instagram acc မှာ တင်ထားတာကတော့ ကားပေါ်လေးမှာ နှုတ်ခမ်းလေး စူပြ နေရင်း ဆွဲဆောင်မှု ပိုနေတဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေး လာပါတယ် ။ မွေ့စံ တစ်ယောက် ကတော့ အမြဲလိုလိုကို လန်းဆန်း တက်ကြွပြီး ချစ်စရာ ကောင်းနေတာ ပါ ။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါတယ် နော် … .
ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြ႕စံ ကေတာ့ အခု လက္ရွိမွာ ဆိုရင္ ပရိတ္သတ္ ေတြ ရဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားအျပား ရရွိေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပါ ။ သူမဟာ အမိုက္ စားခႏၶာ ကိုယ္ အခ်ိဳးအစား ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ ထားတာျဖစ္ၿပီး သူမရဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ပုံရိပ္အလန္း ေတြဟာလည္း ပုရိသေတြရဲ့ ရင္ကိုအမွန္ အကန္ ဟတ္ထိေစ တာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ေမြ႕စံ ဟာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ရပ္တည္ ေနတာလည္း ျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္ဘြဲ႕ရ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ … .
နန္းေမြ႕စံ ဟာ အခု ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ brand နဲ႔ အက်ီ ေတြထုတ္ ေနတာလည္း ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္တိုက္ ဆိုသလို လုပ္‌ကိုင္ ေနတာေတြ႕ ရပါတယ္ ။ နန္းေမြ႕စံ ရဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ ပုံစံေလး နဲ႔ အလန္းစား ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္းေတြဟာ လည္း ပရိသတ္ေတြ ၾကားမွာ ေရပန္း စား ေနတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
မၾကာ ေသးမီ ကလည္း နန္းေမြစံ ဟာ သူမ ရဲ့ Instagram acc မွာ တင္ထားတာကေတာ့ ကားေပၚေလးမွာ ႏႈတ္ခမ္းေလး စူၿပ ေနရင္း ဆြဲေဆာင္မႈ ပိုေနတဲ့ အမိုက္ စား ဗီဒီယိုေလးကို တင္ေပး လာပါတယ္ ။ ေမြ႕စံ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ အျမဲလိုလိုကို လန္းဆန္း တက္ႂကြၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းေနတာ ပါ ။ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post စွဲမက်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ အကြမ်းစားပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
Next post ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းကို အဆမတန်မြင့်သွားစေမယ့် ဆက်ဆီကျကျနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ နန်းအမရာ